သီချင်းကိုအဆင့်တန်း မမီသလို အပြစ်မပုံချဖို့ MYANMAR IDOL ကို သတိပေးစကား ဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန် - Lastest and Trustest News
သီချင်းကိုအဆင့်တန်း မမီသလို အပြစ်မပုံချဖို့ MYANMAR IDOL ကို သတိပေးစကား ဆိုလိုက်တဲ့ ရေမွန်
လူငယ်တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ Idiots Band ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်ပရိသတ်တွေ ကြားမှာေ တာ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေ တဲ့ Band တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Idiots Band ရဲ့ ပင်တိုင် အဆိုတော် တေးသံ ရှင်ရေမွှန် ဟာလည်း နှုတ်ခမ်းနီမေ လးတွေ အသဲစွဲဖြစ်နေသလို ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေလည်း ကြွေနေရတဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစား ချက်တွေပြင်း ထန်ပေါက် ကွဲ စေတဲ့ ခမ်းကြမ်းကြမ်း သီချင်း ပုံစံတွေ နဲ့ ပရိ သတ်တွေ ရူးသွပ်စွာအားပေး ခဲ့ကြရသလို ဆယ်ကျော် သက်တွေ ရဲ့နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခံစားချက် သီချင်းလေးတွေ ကလည်း ပရိသတ်တွေရင် ကိုထိစေ ခဲ့တဲ့ Rock အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ် ။
လတ်တလော ပရိသတ်တွေကြား မှာရေပန်းစားနေတဲ့ TV Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myamar Idol သီချင်းဆိုပြိုင် ပွဲ ကြီးရဲ့ Rock တေးသီချင်းတွေနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ week မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် Yaw Key က ရေမွန်ရဲ့ သီချင်းဖြစ် တဲ့ ” ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ ” သီချင်းနဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီသီချင်း အတွက် ဒိုင်တွေ ပေးတဲ့မှတ်ချက် နဲ့ပတ်သတ် ပြီး ” ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ “သီချင်းက Low (Bass) ကိုအသားပေး ဆိုရတဲ့သီချင်းပါ ။
Bass အသံကိုပေါ်လွှင်အောင်မဆို တတ်လို့ သီချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မှု မရှိတိုင်း သီချင်းကိုချည်း (အဆင့်အတန်း မမှီ သလို) အပြစ်ပုံချလို့ မရပါဘူး ကိုယ့်ဆရာတို့ ။ MMID Fan တစ်ယောက် မဟုတ်သလို ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှလည်း မ ကြည့်ဖြစ်ပါဘူး ( အဆိုတော်တွေ ကို စက်နဲ့ Season အလိုက်ရိုက်ထုတ်နေ တယ်လို့ခံစားရလို့ပါ ) ။ အခုကျွန်တော့် သီချင်း နဲ့ပြိုင်တယ်ဆိုလို့တချက် ဝင်လေ့ကြည့်တာပါ ။ YAW KEY ရေညီလေး Bravo ပါ ။ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရဖို့ထက် တကယ့်လက်တွေ့ မှာဆုရဖို့ကပို အရေးကြီးပါတယ် ။ Vocal အ Fine ကြီးပဲ ။ ကြိုးစားထား ” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ သတိပေး စကားရေးသားပြီး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက် ကနေ ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေး ထားပါတယ် ။
ရေမွန်ရဲ့ ပရိသတ်အချို့ ကလည်း ” အခြားသူ သီချင်းကို ပြန်ဆို တယ် ဆိုတာ သီချင်းပိုင်ရှင် ကို respect ရှိရမယ်. မူရင်း သီချင်းကို အပြစ်ပြောတယ် ဆိုတာ pro မပီသလို့ဘဲ ထင်တယ်. We r idiots. I love this band so much ” ဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေရေး သားထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ထက် သီချင်းကိုအပြစ်ပြောေ ဝဖန်ခဲ့တဲ့အတွက် သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ရေမွန်က ပေါက်ကွဲခဲ့ဟန်တူ ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
Source : Wai Mon Oo, Credit : Cele Connections
သီခငျြးကိုအဆငျ့ တနျးမမီသလို အပွဈမပုံခဖြို့ MYANMAR IDOL ကို သတိပေးစကား ဆိုလိုကျ တဲ့ ရမှေနျ
လူငယျတှနေဲ့ပဲ ဖှဲ့စညျး ထားတဲ့ Idiots Band ကတော့ ဆယျကြျောသကျ လူငယျပရိသတျတှေ ကွားမှာတော့ ဒိတျဒိတျကွဲ အောငျမွငျကြျောကွားနေ တဲ့ Band တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ Idiots Band ရဲ့ ပငျတိုငျ အဆိုတျော တေးသံ ရှငျရမှေနျ ဟာလညျး နှုတျခမျးနီမေ လးတှေ အသဲစှဲဖွဈနသေလို ယောကျြားလေး ပရိသတျတှလေညျး ကွှနေရေတဲ့ အဆိုတျော တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခံစားခကျြတှပွေငျးထနျပေါကျ ကှဲ စတေဲ့ ခမျးကွမျးကွမျး သီခငျြး ပုံစံတှေ နဲ့ ပရိ သတျတှေ ရူးသှပျစှာအားပေး ခဲ့ကွရသလို ဆယျကြျောသကျတှေ ရဲ့နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ခံစားခကျြ သီခငျြးလေးတှေ ကလညျး ပရိသတျတှရေငျ ကိုထိစခေဲ့တဲ့ Rock အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈ ပါတယျ ။
လတျတလော ပရိသတျတှကွေား မှာရပေနျးစားနတေဲ့ TV Program တဈခုဖွဈတဲ့ Myamar Idol သီခငျြးဆိုပွိုငျ ပှဲ ကွီးရဲ့ Rock တေးသီခငျြးတှနေဲ့ သီဆိုယှဉျပွိုငျရတဲ့ week မှာတော့ ပွိုငျပှဲဝငျ Yaw Key က ရမှေနျရဲ့ သီခငျြးဖွဈ တဲ့ ” ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ ” သီခငျြးနဲ့သီဆိုယှဉျပွိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီသီခငျြး အတှကျ ဒိုငျတှေ ပေးတဲ့မှတျခကျြ နဲ့ပတျသတျ ပွီး ” ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ “သီခငျြးက Low (Bass) ကိုအသားပေး ဆိုရတဲ့သီခငျြးပါ ။
Bass အသံကိုပျေါလှငျအောငျမဆို တတျလို့ သီခငျြးနဲ့လိုကျဖကျမှု မရှိတိုငျး သီခငျြးကိုခညျြး (အဆငျ့အတနျး မမှီ သလို) အပွဈပုံခလြို့ မရပါဘူး ကိုယျ့ဆရာတို့ ။ MMID Fan တဈယောကျ မဟုတျသလို ဘယျပွိုငျပှဲမှလညျး မ ကွညျ့ဖွဈပါဘူး ( အဆိုတျောတှေ ကို စကျနဲ့ Season အလိုကျရိုကျထုတျနေ တယျလို့ခံစားရလို့ပါ ) ။ အခုကြှနျတေျာ့ သီခငျြး နဲ့ပွိုငျတယျဆိုလို့တခကျြ ဝငျလကွေ့ညျ့တာပါ ။ YAW KEY ရညေီလေး Bravo ပါ ။ ပွိုငျပှဲမှာ ဆုရဖို့ထကျ တကယျ့လကျတှေ့ မှာဆုရဖို့ကပို အရေးကွီးပါတယျ ။ Vocal အ Fine ကွီးပဲ ။ ကွိုးစားထား ” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ သတိပေး စကားရေးသားပွီး လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာထကျ ကနေ ပရိသတျတှကေိုမြှဝပေေး ထားပါတယျ ။
ရမှေနျရဲ့ ပရိသတျအခြို့ ကလညျး ” အခွားသူ သီခငျြးကို ပွနျဆို တယျ ဆိုတာ သီခငျြးပိုငျရှငျ ကို respect ရှိရမယျ. မူရငျး သီခငျြးကို အပွဈပွောတယျ ဆိုတာ pro မပီသလို့ဘဲ ထငျတယျ. We r idiots. I love this band so much ” ဆိုပွီးမှတျခကျြတှရေေး သားထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ ပွိုငျပှဲဝငျထကျ သီခငျြးကိုအပွဈပွောေ ဝဖနျခဲ့တဲ့အတှကျ သီခငျြးပိုငျရှငျဖွဈသူ ရမှေနျက ပေါကျကှဲခဲ့ဟနျတူ ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ ..။
Previous Article ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် လုပ်သားရှစ်သောင်း ခန့်ဖြင့် စက်ရုံ ၄၂ ရုံ လည်ပတ်နေပြီး ရန်ကုန်တိုင်းမှ ပိတ် သိမ်း သွားသော စက်ရုံများ လာရောက် ကမ်း လှမ်းနေ
Next Article မြန်မာ့ ထန်းလျက် ယပ်တောင်ကို နိုင်ငံခြားတွင် မြန်မာငွေ (၆) သောင်းအထိ ပေးဝယ်နေရ